Factory Taxanaha Line Production Cadka - Shiinaha Box Taxanaha Soosaarka Cadka Soosaarayaasha iyo Alaab-qeybiyeyaasha
OK-220 Nooca Mashiinka Kartoon Cadka Cadka Buuxa Oo Buuxa
Waxqabadka Ugu Muhiimsan Iyo Qaabdhismeedka Qaababka 1. Foomamka xirxirida sida quudinta otomaatiga ah, furitaanka sanduuqa, feerka, dufcadda No. daabacaadda, faafidda xabagta, sanduuqa wax lagu shaabadeeyo, iwm. Qaab dhismeedka is haysta iyo mid macquul ah, hawlgal fudud iyo hagaajin. Mashiinka 2.Servo, shaashadda taabashada, nidaamka xakamaynta PLC iyo muuqaalka muuqaalka mashiinka mishiinka ayaa ka dhigaya hawlgalku mid aad u cad oo ku habboon. Iyada oo leh shahaadada otomaatiga sare, mashiinku waa mid aad u fudud saaxiibtinimo. 3.Waxyaabaha otomaatiga ah ee diyaarinta iyo habka gudbinta ayaa la qaatay t ...
Nooca OK-100B Mashiinka Kartoon Cadka Cunug Buuxda Oo Buuxa
Waxqabadka Ugu Muhiimsan Iyo Qaabdhismeedka Qaababka 1. Foomamka xirxirida sida quudinta otomaatiga ah, furitaanka sanduuqa, feerka, dufcadda No. daabacaadda, faafidda xabagta, sanduuqa wax lagu shaabadeeyo, iwm. Qaab dhismeedka is haysta iyo mid macquul ah, hawlgal fudud iyo hagaajin. Mashiinka 2.Servo, shaashadda taabashada, nidaamka xakamaynta PLC iyo muuqaalka muuqaalka mashiinka mishiinka ayaa ka dhigaya hawlgalku mid aad u cad oo ku habboon. Iyada oo leh shahaadada otomaatiga sare, mashiinku waa mid aad u fudud saaxiibtinimo. Qalabka tooska ah ee diyaarinta iyo habka gudbinta waa la qaatay ...
Nooca OK-400B Nooca Gawaarida Gawaarida Gawaarida Gawaarida Gawaarida Gawaarida Gawaarida
Waxqabadka Muhiimka ah iyo Qaabdhismeedka Qaab-dhismeedka 1. Mashiinkaan waxaa loogu talagalay xirmada xirmooyinka xirmada ee unugyada. 2.Vertical nidaamka wadista daab daab si loo hubiyo in khadka wax lagu xiro oo qumman. Naqshadeynta naqshadeynta darafka 3.Adopt, dhererka alaabada si xor ah ayaa loo hagaajin karaa. 4.Shealing dhererka xariiqda ayaa si xor ah loogu hagaajin karaa iyadoo loo eegayo dhererka alaabada Model & Main Parameters Halbeega Model OK-400B Xawaaraha Xirmooyinka (kiisaska / min) ≤40 Cabirka muuqaalka jirka ugu weyn (mm) L1850xW1450xH1400 Miisaanka Mashiinka (...
OK-10 Nooca Maker Mashiinka Sameeya
Waxqabadka Muhiimka ah iyo Qaabdhismeedka Qaab-dhismeedka 1. Foomamka xirxirida sida quudinta maaddada tooska ah, quudinta filimka, kala-goynta, quudinta gacanta, hagaajinta wax-qabadka, iwm. Qaab dhismeedka is haysta iyo mid macquul ah, hawlgal fudud iyo hagaajin. Mashiinka 2.Servo, shaashadda taabashada, nidaamka xakamaynta PLC iyo muuqaalka muuqaalka mashiinka mishiinka ayaa ka dhigaya hawlgalku mid aad u cad oo ku habboon. Iyada oo leh shahaadada otomaatiga sare, mashiinku waa mid aad u fudud saaxiibtinimo. 3.Waxyaabaha otomaatiga ah ee diyaarinta iyo habka gudbinta ayaa loo qaatay fa ...